Ejipta: Mamely an’i Eissa, na mamely ny fahalalahan’ny fanaovan-gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2010 15:09 GMT
Ny tompony vaovao ao amin'ny Al-Dostour – iray amin'ireo gazety tsy miankina malaza ao Ejipta – dia nandroaka an'i Ibrahim Eissa, tonian-dahatsoratra sady mpiara-namorona ny gazety, tranga nitarika resaka be teny anivon'ny bilaogy sy ny sehatry ny asa fanaovan-gazety Ejiptiana.
Al-Dustour (ny Al-Dostour sy Al-Dostor, samy midika “Ny Lalampanorenana”) dia natsangana tamin'ny Desambra 1995. Ilay gazety niainga avy amin'ny famoahana isan-kerinandro rehefa Alarobia dia niova ho gazety sady mpivoaka isan-kerinandro no mivoaka isan'andro ihany koa. Tamn'ny volana Aogositra 2010, lasan'i Sayed El-Badawy, ilay mpandraharaha malaza sady filohan'ny Antoko Liberaly mpanohitra Al-Wafd ilay gazety, niaraka tamina mpandraharaha hafa, isan'ireny ilay mpandraharaha Reda Edward.
Gazety Ejiètiana iray hafa, Al-Masry Al-Youm, avy eo no nanao fanamarihana momba ilay famarotana ary niteny fa:
Maro koa no mino fa ity fifampivarotana vaovao ity dia mety hitondra any amin'ny fihenan'ny tsikera ataony, ary miahiahy fa mety ho nanao fifanarahana miafina tamin'ny fitondrana i El-Badawy ho andrana fampanginana ny fomba fijery mitratrevatrevan'io gazety io.
Ny vaovao mikasika ny fandehanan'i Eissa dia anton-dresak'ireo mpitoraka bilaogy manerana an'i Ejipta, izay nanararaotra izany koa handalinana ny zava-misy eo amin'ny sehatry ny fanapariaham-baovao Ejiptiana.
Nanoratra momba ny fandroahana an'iEissa i Issandr El Amrani tao amin'ny bilaoginy, Arabist. Nanamarika ihany koa izy mikasika vaovao tsy voaporofo milaza fa anton'ny nandroahana an'i Eissa ny fisisihany hamoaka Taratasy misokatra nosoratan'ilay Ejiptiana mpirotsaka ho filoham-pirenena, Mohammed ElBaradiee, ary ny siosion-dresaka no nahalalana fa tsy nanaiky ny hamoahana an'izany ireo olona vaovao tompon'ny gazety.
Ny vaovao mankadiry eto Ejipta androany maraina dia i Ibrahim Eissa, ilay mpamorona ny gazety al-Destour, noroahan'ny tompony vaovao, al-Sayyid Badawi, mpitarika ny antoko Wafd. Tsy mazava loatra ny anton'ny nahatonga izany, saingy be no mihevitra fa heo satria i Eissa nikasa hamoaka lahatsoratra fanakianana nosoratan'i Mohamed ElBaradei adin'ny 6 Oktobra.
Avy eo dia nitondra fanamarihana momba ilay Taratasy misokatra avy amin'i ElBaradie i Zeinobia, ary ny mahatonga azy hino fa tsy io velively no anton'ny fandroahana an'i Eissa.
Namaky azy io aho ary tsy hitako izay tokony hahatezitra an'i Badawy momba azy io!!??
Taorian'ny famakiana ilay Taratasy misokatra, resy lahatra aho fa tsy io no tena antony, niandry zavatra hafa hanamarinany ny fihetsiny i Badawy ary dia nahita fotoana volamena hanatanterahany izany vitan-dratsiny izany tamin'ity resaka taratasy misokatra ity, vitan-dratsy hoy aho, satria nitombo avo roa heny ny fitiavan'ny olona an-dry ElBaradei sy Eissa.
i Mohamed El-Etr avy eo no niezaka haminany izay tena antony marina ao ambadiky ny fandroahana an'i Eissa.
Ary ankehitriny, amin'ny fijeriko manokana, misy antony telo ao ambadiky ny fandroahana azy.
Ny voalohany: El Badawy dia efa nanana ny tetiny miafina hitondrana ny politikan'ny famoahan-dahatsoratra an-gazety mba hanapariahana ny hevitry ny antokony – sy hampiasa azy io ho fitaovana fampielezan-kevitry ny antponkony mandritra ireo fifidianana izay ho solombavambahoaka ho avy.
Ny faharoa: Misy ny fifanarahana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy Badawy, izay milaza fa tsy ho olan'ny mpitondra intsony i Al-Dostour sy Ibrahim Eissa ary ireo rako-baovaon-dry zareo mikasika ny fifidianana, indrindra indrindra fa tsy loza manàmbana ho an'ny antokon'ny mpitondra i Al Wafd, ka izay vao avy nitranga teo dia endrika iray monja avy amin'izay fifanarahana teo amin'i Al Wafd sy ny antokon'ny mpitondra izay.
Ny fahatelo: Mikasa ny hampangiana ny feon'i El-Baradie i El-Badawy, satria hatramin'ny farany dia mpifaninana ho amin'ny toeran'ny filoha mpitarika ny mpanohitra izy roalahy ireo, ary ny famoahana ny lahatsoratr'i El-Baradie dia midika fanampiany azy amin'ny fampakarana ny isam-batony, ary amin'izay dia mitovy tanjona tratrarina amin'ny fitondrana izy.
Azontsika takarina avy amin'izany ny antony ao ambadiky ny nandroahana an'i Eissa, ary ny fomba anaporofoana avy amin'ny zava-mitranga fa nanao fifanarahana tamin'ny fanjakana tokoa i El-Badawy.
Raha somary hivelatra kokoa isika, dia efa nisy tranga mitovy amin'io niseho tsy ela akory izay teto Ejipta. Andro vitsy lasa izay, i Eissa tenany mihitsy no ketraka noho ny nampiatoana ny fandaharany “Baladna Bel Masry” tao amin'ny ON-TV. Manoratra eto i Zeinobia ny amin'ny fomba mety ho nanakanana ny fandaharana tsy halefa tao amin'ilay fantsona- izay Ejiptiana mpandraharaha iray hafa no tompony, Naguib Sawiris- rehefa naharay baiko avy amin'ny fanjakana hanatanterahana izany.
Dia izao izany e, manana vaovao ratsy ho anareo aho, tsy hisy andiam-pizaràna vaovao intsony satria araka ny loharanom-baovao samihafa avy ao anatin'ilay fantsona ihany, izay tsy mitonona anarana, dia tsy mahazo alòlana hiteny mivantana intsony i Eissa, Toa hoe naharay baiko avy amin'ny fitondrana hampiato ny fandaharany ny foibe.
Namoaka lisitr'ireo trangan-javatra niseho tato ho ato ihany koa i Ahmed El-Masry toy ny fanakanana ny fandaharana mivantana fanaon'i Amr Adib, Al-Qahera El Youm (Le Caire amin'izao fotoana) tao amin'ilay fantsona Orbit mandeha amin'ny zanabolana, sy ny ahiahin'ny tompon'ny Dream-TV, fantsona mandeha amin'ny zanaboana sao dia hosakanana koa ny fandaharana malaza ao amin-dry zareo, ankoatr'ireo tranga hafa maro.
Mino aho fa tsy misy idiran'izay fifanandrifian-javatra mihitsy ny zava-miseho eto Ejipta amin'izao androntsika izao.
Voasakana tsy hahazo miseho amin'ny rehefa mety ho TV i El-Baradie.
Sangy ratsy ny fampilezan-kevitra ataon'ny Al-Wafd.
Fandraràna ny fandaharana mivantan'i Amr Adib tao amin'ny TV Orbit.
Fandraràna ny fandaharana mivantan'i Ibrahim Eissa tao amin'ny ON-TV
Ny fanambaràn'i Ahmed Bahgat – tompon'ny DreamTV – fa hoe matahotra izy sao ho voaràra ny resadresaka mivantana, El-Ashera Masa'an (10 ora alina).
Fandraràna ny lahatsoratr'i Hamdi Kandil sy Alaa El-Aswany tsy havoaka tamin'ny gazety Shorouk
Certains de ces incidents pourraient ne pas avoir une toile de fond politique, comme l'émission d’ Amr Adib, comme le soutiennent certains, d'autres pourraient être de simples spéculations et des rumeurs non confirmées, comme celles concernant El-Baradie, Alaa El Aswany [en arabe], et Ahmed Bahgat, mais personne ne peut denier à El-Masry le droit de se demander si ces incidents sont des coïncidence, et il a toutes les raisons d'être inquiet pour l'avenir. Na dia maro amin'ireo tranga notaterina ery ambony aza no mety tsy mamofompofona politika ao ambadimbadiny ao toy ny fandaharana mivantan'i Amr Adib, izay aloha no ilazan'ny sasany azy, ary ny sisan'izay dia mbola sahoan-dresaka fotsiny sy vaovao tsy azo antoka toy ilay momba an'i El-Baradie, Alaa El Aswany [Ar], ary Ahmed Bahgat, fa tsy misy afaka mandà ny zon'i El-Masry hanontany tena raha toa ireny tranga rehetra ireny ka fifanandrifian-javatra daholo ihany, ary zony tanteraka ny hiahiahy momba ny hoaviny.
Heveriko fa tsy ho ela akory isika dia hiatrika fanapahan-doha ny fanapariaham-baovao, ny fanivànana bilaogy, fitsarana ireo mafàna fo, ary ireo izay tsy ho hay sakanana dia halàm-baraka.
Mety ho very toky ireo Ejiptiana mpitoraka bilaogy, Ny sasany amin'ny zava-mitranga voalaza etsy ambony – isan'izany ny fandroahana an'i Ibrahim Eissa tao amin'ny Al-Dostour – dia mety ho noho ny antony tsy ara-politika, ary mety tsy hitombina ny sasantsasany amin'reo ahiahy, kanefa aty amparany, ireo mpampahalala vaovao tsy miankina na mpanohitra dia mifandimby midaraboka tsirairay ihany. Ary manontany tena ny vahoaka raha tena misy tokoa tànana manana anjara andraikitra amin'ireny fidarabohana ireny na tsia.
Farany, ny vaovao etsy ambany nampidirin'i Ahmed Shokeir tao amin'ny kaonty twiiter-ny dia mamehy ny fomba fahitàn'ireo mpitoraka bilaogy eto an-toerana ny zava-mitranga eo amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana:
Hoy ny vadiko nanoratra tao amin'ny Facebook: menatra mafy an'ilay mpanatitra gazety aho izao. Volana vitsy lasa izay dia niteny taminy aho fa tsy hividy ny Al-Masry Al-Youm intsony, ary rahampitso dia hiteny aminy indray fa tsy hividy ny Al-Dostour intsony.